Her Blue Sky – MMANIME
Miyuki Kuroki, Tatsuyuki Nagai
Akinori Egoshi, Atsumi Tanezaki, Fukushi Ochiai, Hiroyuki Yoshino, Ken Matsudaira, Riho Yoshioka, Ryo Yoshizawa, Shion Wakayama, You Taichi, Yuto Uemura
အထက်တန်းကျောင်းသူလေး Aoi Aioi ဟာသူမရဲ့ မိဘတွေ မတော်တဆမှု တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ သူမ၏ အမကြီးဖြစ်သူ Akane နဲ့အတူ နေထိုင်ခဲ့တယ်။ Aoi ဟာဘွဲရပြီးတဲ့နောက်မှာ Akane ရဲ့ex ဖြစ်သူ Shinno လိုခေါ်တဲ့ Shinnosuke Kanamuro ရဲ့လှုဆော်ပေးမှုကြောင့် သူမ၏အမ ဝန်မလေးအောင် ဂီတလုပ်ငန်းတစ်ခု ရှာရန် Tokyo ကိုပြောင်းချင်ခဲ့တယ်။သူဟာ တီးဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ အဖွဲဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး Akaneရဲ့မိဘတွေ ကွယ်လွန်သွားတဲ့နောက်မှာ ဂီတာတီးကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေရန် Tokyo ဆီကိုထွက်ခွာခဲ့ပြီး သူတိုဟာ ပြန်မတွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြဘူး။
တစ်နေ့လယ်ခင်းမှာတော့ Aoi ဟာဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ဂီတာတီးလေ့ကျင်နေချိန်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ 13နှစ်က Shinno ရဲ့ 18နှစ် အရွယ်ပုံစံ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပြီး ထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်။ တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲ အသက်၃၁နှစ်ရှိတဲ့ လက်ရှိ Shinno ဟာလည်း မြိုကိုပြန်လာပြီး တော်တော်လေး ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲ Shinno ဟာနှစ်ယောက် ဖြစ်နေခဲ့ပြီး အတိတ်က Shinno ဟာဘာကြောင့် လက်ရှိမှာ ရှိနေသေးတာလဲဆိုတော့…
ဒီ Her Blue Sky ရုပ်ရှင်မှာတော့ သူတိုလေးယောက်ဟာ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ရင်တွင်းစိတ် ခံစားချက်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ရှေ့လျှောက် သူတိုရဲ့ ဘဝကို သက်ရောက်စေမဲ့ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချသွားမလဲဆိုတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
Miyuki Kuroki Tatsuyuki Nagai
Akinori Egoshi Atsumi Tanezaki Fukushi Ochiai Hiroyuki Yoshino Ken Matsudaira Riho Yoshioka Ryo Yoshizawa Shion Wakayama You Taichi Yuto Uemura
Akinori Egoshi Atsumi Tanezaki Chikahiro Kobayashi Fukushi Ochiai Hiroki Maeda Hiroshi Tsuchida Hiroyuki Yoshino Ken Matsudaira Riho Yoshioka Ryo Sugisaki Ryo Yoshizawa Ryuichi Kijima Shion Wakayama Taiten Kusunoki You Taichi Yuka Nukui Yuto Uemura
Option 1 Mega nz 980mb 1080p
Option2Gdrive 980mb 1080p
Option3Mediafire 980mb 1080p
I’ve been browsing on-line greater than3hours as of late, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It is pretty price enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will probably bealot more helpful than ever before.
One Picec film Z